Toogasho Ay Dad Ku Dhinteen Oo Ka Dhacday Waddanka Mareykanka – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Toogasho Ay Dad Ku Dhinteen Oo Ka Dhacday Waddanka Mareykanka
Last updated Mar 11, 2021 211 0
Boliska waddanka Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in saakay oo khamiis ahayd ay toogasho ka dhacay magaalo katirsan gobalk Texas ee waddanka Maraykanka.
Toogashadaan oo sigaar ah kaga dhacay magaalada Houston ee gobalka Texas ayaa waxaa lagu dilay 3-ruux oo American ah halka lagu dhaawacay ruux kale sida ay sheegeen saraakiisha boliska.
Bayaan kasoo baxay boliska ayaa lagu xaqiijiyay geerida saddexdaan ruux iyo dhaawaca qofka affaraad, iyagoona intaas ku daray in toogashadu ay si gaar ah kaga dhacday goob gawaarida la dhigto oo ku taalla magaalada Houston ee gobalka Texas.
Wargeyska New York Times oo xiganaya sarkaal katirsan ciidamada boliska ayaa sheegay in aan illaa iyo hadda la caddeyn cidda ka dambeysa toogashadaan, isagoona intaas raaciyay in ruuxa affaraad ee dhaawacmay la dhigay isbitaalka.
Magaalada Houston ayaa waxaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale uga dhacay toogashooyin nuucaan, waxayna dhacdadaan kusoo aadaysaa iyadoo habeenkii talaadada toogasho ka dhacday isla magaaladaan lagu dilay laba ruux.
Bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale magaalada Houston hal habeen gudihiis ka dhacay illaa saddex toogasho, sida ay soo tabinayso warbaahinta waddanka Maraykanka.